Islamic | Muslim Info Burma , مسلم معلومات بورما
ဟစ်ဂျရသ်၊ ဂျေဟာဒ်၊ စစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး
Posted on January 16, 2013 by musliminfoburma
ယခုအခါ လူများစွာကပင် အစ္စလာမ်၏ စစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ အမြင်များကို ပြောဆို လာ နေကြ သည်။ ဤမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြေတစ်ရပ်ကို ပေးဖို့ရာလွယ် ကူလှသည် မဟုတ်ပါ။ အစ္စလာမ် ဟူသော ဝေါဟာရကို သုံးစွဲလာသူတိုင်းနည်းတူပင် စစ်အကြောင်းကိုလည်း အများပြော လာကြသည်။ ဤနှစ်ခုအကြား ဆက်စပ်မှုကလည်း သူ့အလိုလို ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပေသည်။ အထူးသဖြင့် နိုင် ငံရေး သမားများ၊ စာနယ်ဇင်းများနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများက အစ္စလာမ် ကို ကြောက်စရာအဖြစ် ထင်ဟပ်သွားအောင် ဘာသာရေးစစ် (Holy War) ဆိုပြီးတော့ ပါ ဖြည့် စွက်ပြီး ဝေဖန်လာခဲ့ကြသည်။
အစ္စလာမ်ဟူသည် ငြိမ်းချမ်ရေးကို ဖန်တီးခြင်းမည်၏
ယနေ့ အစ္စလာမ်ဟူသော ဝေါဟာရကို လူသုံးများလာသလောက် ယင်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကိုကား လူ အနည်း ငယ် ကသာ သိရှိကြပါသည်။ အများစုကြီးကမူ ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတစ်ခု၏ အမည်ဆိုရုံ လောက် သာ သိထားကြပါတော့သည်။ ယုံကြည်ချက်၏ အဓိကလိုအင်များကို ထင်ဟပ်ထားရာ ဤဝေါဟာရ၏ အနက် ကိုမူ စဉ်းစားမိသူက အနည်းအကျဉ်းမျှသာရှိပါသည်။ ဤသို့အနက်အမှန်ကို မသိရှိကြ ရာက မလိုတမာ အမြင်မှား အထင်မှားမှုများက တွင်ကျယ်သွားရခြင်းဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ် သည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖန်တီးခြင်းဟု အနက်အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖန်တီးယူရာ ဘ၀လမ်းစဉ်နှင့် ဘာသာတရားလည်းဖြစ်သည်။ ဖန်တီးယူမှုဟူသော အမည်သည်ကပင်လျှင် အစ္စလာမ်ဖြစ် သည်။ လူသားထုအတွက် အရေးပါသမျှ အခန်းကဏ္ဍ အသီးသီးဝယ် အစ္စလာမ်က ငြိမ်းချမ်းပကတိရှိနေရေးကို လိုလားပါသည်။ လူသည် ထာဝရအရှင်နှင့် မိမိကိုယ်ကိုပါ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရယူပါမည်။ ဤသို့ဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံပြုမူနေထိုင်သူကိုသာ မွစ်လင်မ် (၀ါ) ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖန်တီးသူဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
ဘာသာရေးစစ်ပွဲ (Holy War) ဟူ၍မရှိပါ
ဤသို့ဆိုပါက “ဘာသာရေးစစ်ပွဲ (Holy War) ဆိုသည်က မည်သည့်သဘောပါနည်း” ဟု မေးစရာရှိ လာပါ သည်။ တကယ်ဆို ကုရ်အာန်ထဲတွင်လည်း ဘာသာရေး စစ်ပွဲဆိုပြီးမပါရှိပါ။ အစ္စလာမ်နှင့် ဘာမှ မပတ်သက်သော ဝေါဟာရ တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါသည်။ အနောက်တိုင်း အီဆာ အီတို့က အရှေ့တိုင်းအပေါ် ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲရာဝယ် အစ္စလာမ်နှင့် မွစ်လင်မ်များ အပေါ် ဆန့်ကျင်ခဲ့စဉ် အလယ်ခေတ်၌ ထွင်လိုက်သည့် အခေါ်အဝေါ် တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို လူတို့က ဘာသာရေးစစ်ပွဲ (Holy War) ဟု ခေါ်ဆိုကြရာက တွင်သွားရခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ “သူခိုးက လူလူ” ဆိုပြီး ဟစ်နေခြင်း သည်ဖြစ်သည်။
ကုရ်အာန်ထဲတွင် ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆိုပြီး မပါပါလျှင် ဂျေဟာဒ်ဟူသည် ဤအဓိပ္ပာယ်ပင် မဟုတ်လော ဟု မေးစရာရှိလာပါသည်။ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ဂျေဟာဒ်သည် ကုရ်အာန်မှ ဝေါဟာ ရဖြစ် ပြီး မြင့်မြတ်သောဟူ၍ရော၊ စစ်ဟူ၍ရော အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်မထားပါ။ ယင်းကို ဘာသာပြန်ရန်ပင် မလွယ်ကူ လှပါ။ အကောင်းဆုံးဖော်ပြနိုင် သည်ကား “အစွမ်းကုန် တစ်စုံတစ်ရာ အားလုပ်ဆောင်ခြင်း” (သို့မဟုတ်) “အပြည့်အ၀ ကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားမှု” ဟု အနက်ရပါ သည်။ ဤအတွက်ကြောင့် မွစ်လင်မ်(ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖန်တီးသူ)၏ ကြိုးပမ်းချက်ခပ်သိမ်းသည်ပင် ဂျေဟာဒ်မည်ပါသည်။ သို့အနေနှင့် ဂျေဟာဒ်ဟူသည့်အပြည့်အ၀ကြိုးပမ်းချက် မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတမှု တို့ အတွက် လုပ်ဆောင်မှုကို ပြည့်ဝသော ပကတိရိုးသားသောလုပ်ရပ်ဆိုပြီးယူ၍ မရသေးပါ။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ)သခင်က “အကောင်းဆုံးသော ဂျေဟာဒ်ဟူသည် တရားမဲ့သော မင်း၏ ရှေ့မှောက်ဝယ် မှန်ကန်ရာ (တရားမျှတရာ) စကားကို ဆိုခြင်းပင်တည်း” ဟု မိန့်ခြွေခဲ့ပါသည်။ ဤအချက်ကပင် အပြည့်အ၀ ကြိုးပမ်းချက်ဟူသည် အဘယ်အမျိုးအစားဆိုသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ ညွှန်ပြနေပါသည်။ မိမိ၏ကြောက်စိတ်ကို အောင်နိုင်ရမည်။ နစ်နာမည်ကို စိုးရွံ့၍ ရေငုံနှုပိတ်နေခြင်းနှင့် အတ္တ၀ါဒကို အောင်နိုင်ရပါမည်။
ဤ ဂျေဟာဒ်ဟူသည် မိမိ၏ အတ္တကို ထိန်းချုပ်အောင်နိုင်ခြင်းလည်း မည်ပါသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် ပင် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)က မိမိ၏ အဆွေတော်များနှင့် စစ်မြေပြင်မှပြန် လာခိုက်ဝယ် “ငါတို့ တတွေ ကား အသေးစားဂျေဟာဒ်ဘက်မှ အကြီးစားဂျေဟာဒ် ဘက်သို့ ပြန်လှည့်ခဲ့ကြပြီ” ဆိုပြီး မိန့်တော် မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်မှုက အသေးစားဂျေဟာဒ်ဖြစ်ပြီး မိမိအတ္တကို တိုက် ခိုက်ခြင်း က အကြီးစားဂျေဟာဒ် ဟုဆိုပါသည်။ အစ္စလာမ်တွင်စစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ပြောကြား ရာ၌ ဤအမြင်ကို နှလုံးပိုက်ထားရပါမည်။
ဂျေဟာဒ်သည် အစ္စလာမ်လူ့အဖွဲ့အစည်းဟူသော အိမ်ကို မိုးထားသော အမိုးပမာ အရေးပါသော ကျင့်စဉ် တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သာဂျူလ်အူရုစ်ကျမ်းတွင် ဂျေဟာဒ်ကို အေမာမ်ရာဂိဗ်က အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြရာတွင် အင်းအားကို အားကုန်သုံး၍ လှုပ်ရှားကြိုးပမ်းခြင်းဟု ဖော်ပြထားသည်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရာတွင် ဂျေဟာဒ်တွင် မွစ်လင်မ်တို့အဖို့ ရည်မှန်းချက်ပန်း တိုင်သို့ချီတက် ရာတွင် တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲကို တွန်းလှန်ဖယ်ရှား ကြိုးပမ်းလှုပ် ရှားခြင်းကို ဖော်ပြထား သည် ကို တွေ့ရသည်။ ယင်းသို့ကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားရာတွင် နောက်ဆုံး အနေဖြင့် စစ်မက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် ရည်မှန်း ချက်အတွက် အသက်ကိုပင် စွန့်လွှတ်ခြင်းကို ပြုကြရသည်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ် လှုပ် ရှားခြင်း ကို ဂျေဟာဒ်ဟုခေါ်သည်။ သတိထားရမည်မှာ တရားသော စစ်မက် တိုက်ခိုက်ခြင်း သည် ဂျေဟာဒ်တွင် ပါဝင်သည့် အချက်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် စစ်မက်တိုက်ခိုက်ခြင်း မှန်သမျှ ကို ဂျေဟာဒ် ဟု ခေါင်းစဉ် မတပ်နိုင်သလို ဂျေဟာဒ်မဟုတ်သည်ကိုလည်း သတိပြုရပေမည်။ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန် ရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် မုအ်မင်န်မှန်သမျှသည် ဂျေဟာဒ်ကို ဆင်နွှဲရန် အသင့်ပြင်ထားသော မူဂျာဟစ်များဖြစ်ကြ သည်။ သို့ဖြစ်၍ မုအ်မင်န်တိုင်းသည် ဂျေဟာဒ်၏ အမြင့်ဆုံးသောအဆင့်ဖြစ်သော စစ်မက်တိုက်ခိုက်ခြင်း အတွက် အသင့်ပြင်ထားရန် တာဝန်ရှိသည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ် အာန်သည် ဂျေဟာဒ် ကို မဆင်နွှဲ သူတို့ အား အချောင်သမား ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းအချောင်သမားများနှင့် မူဂျာဟစ်တို့ ၏ ကွာဟချက်ကို ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်က အောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြထားသည်။
“ကိုယ်လက်သန်စွမ်းပါလျှက် အချောင်ခိုနေသော အချောင်သမားများသည် အလ္လာ့ဟ် အရှင်မြတ် ၏ လမ်းမပေါ်ဝယ် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်လှုပ်ရှားနေသော မုဂျာဟစ်တို့နှင့် မည်သို့မျှ ထပ်တူ ထပ်မျှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်သည် မူဂျာဟစ်တို့အား မြင့်သော အဆင့်တွင်ထား၍ အရှင်မြတ်ထံမှ ဆုလာဘ်တော်လည်း ရရှိပေမည်” (၄း၉၅)
ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုကာလတွင် စွန့်လွှတ်မှုအလုံးစုံကို ပြုလုပ်ရသည်လည်း ရှိသည်။ ယင်းသို့စွန့်လွှတ်ရာတွင် ဥစ္စာစည်းစိမ်သာမက သားမယားပင် စွန့်ခွာရသည်လည်းရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိမိမွေးဖွားခဲ့သော မိခင်မြေကို စွန့်ခွာ၍ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရေးအတွက် အဝေးသို့ လှုပ်ရှား သွားလာခြင်းကို ဟိဂျရသ်ပြုသည်ဟု ခေါ်သည်။ ယင်းသို့ ဟိဂျရသ်ပြုသောသူကို မုဟာဂျီရီးန် ဟူ၍လည်းခေါ်သည်။ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို မုဟာဂျီရီန်ဟူ၍ခေါ် ဆိုကြသော် လည်း ဂျေဟာဒ်သည် စစ်မက်တိုက်ခိုက်ခြင်း သက်သက်ကို မခေါ်ဆိုသကဲ့သို့ ဟိဂျရသ်ပြုခြင်း သည် လည်း နိုင်ငံစွန့်လွှတ်၍ သက်သက်ထွက်ပြေးခြင်းကို မခေါ်ဆိုပါ။ သို့ဖြစ်၍ စစ်ပြေးတိုင်း သည် လည်း မုဟာဂျီရီးန်မဟုတ်သည် ကိုလည်း သတိပြုသင့်သည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်သည် ဂျေဟာဒ်၏ အရေးပါပုံကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
“အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏လမ်းစဉ်အတွက် ကြိုးစားပမ်းစားမှုထက် အသင်တို့သည် ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကို သာလွန်မက်မောမြတ်နိုးကြလျှင် အသင်တို့သည် “ဖာစိက်” သွေဖီရေးသမားသက်သက် သာလျှင် ဖြစ် မည်” (၉း၂၄)
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်သည် မုဟာဂျီရီးန်နှင့် မုဂျာဟီဒီးန်တို့မှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခွဲခြားမရအောင် အမှီ သဟဲပြုနေ ကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
“မုဟာဂျီရီးန်များသည် သူတို့၏ ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကို စွန့်လွှတ်၍ ထွက်ခွာလာကြသကဲ့သို့ မုဂျာဟီဒီးန်တို့သည် သူတို့၏ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ ပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ ကြိုးပမ်းကြသည်။ ယင်းသူတို့ သာလျှင် အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏ ရှေ့တော်မှောက်တွင် သာလွန်မြင့်မြတ် အဖိုးတန်ပေသည်” (၉း၂၀)
“မှတ်သားကြလော့၊ မိမိအိုးအိမ်များစွန့်ခွာ၍ ဟိဂျရသ်ပြုခဲ့သော မုဟာဂျီရီးန်များ၊ မိမိဥစ္စာပစ္စည်း၊ အသက်အားဖြင့် ကြိုးပမ်းကြသော မုဂျာဟီဒီးန်များသာမက ယင်းသူတို့အား လက်ခံကူညီ ရိုင်းပင်းခဲ့ကြသော သူတို့သာလျှင် စစ်မှန်သော မုအ်မင်န်ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်” (၈း၇၄)
ယင်းအရေးပေါ်ကာလတွင် မပါဝင်သောသူတို့အား ကုရ်အာန်က အောက်ပါအတိုင်း ဆိုသည်။
“အကြင်သူသည် အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံသည်မှန်လည်း ဟိဂျရသ်ကာလတွင် ဟိဂျရသ်မပြုခဲ့လျှင် ယင်းသူတို့အား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်သည် အသင်တို့အပေါ်တွင်မရှိချေ” (၈း၇၂)
လူသည် မိမိ၏ အသက်ကို အလွန်တန်ဖိုးထားလေ့ရှိသည်။ ဘ၀ရပ်တည်မှုအတွက် အသက်ရှူခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ စားသောက်ခြင်း၊ မေထုန်မှုပြုခြင်းသက်သက်ကိုသာလျှင် ပြုလျှင် ယင်းဘ၀သည် တိရစ္ဆာန် ဘ၀ သက်သက်ဟုခေါ်ဆိုရပေမည်။ လူ၏ထူးခြားသောအချက်မှာ တိရစ္ဆာန်ထက် သာလွန်သော လူ့ဘ၀တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းလူ့ဘ၀တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် ရာတွင် စွန့်လွှတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးကို စွန့်လွှတ် နိုင်စွမ်းရှိခြင်းသည် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ယင်းစွန့် လွှတ်ခြင်း တွင် ဟိဂျရသ်ပြုခြင်းနှင့် ဂျီဟာဒ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်းသည် အမြင့်မြတ်ဆုံးသော စွန့် လွှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သိထိုက်ပေသည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က မုအ်မင်တို့အား သေခြင်းကို မကြောက် ရန် သွန်သင်သည်။ ထိုမျှမက မုအ်မင်န်အမှန် တကယ်ဖြစ်လိုလျှင် သေခြင်းကို စိန်ခေါ်တမ်း တရန် ဆိုသည်။
ယင်းသို့သေခြင်းကို စိန်ခေါ်တမ်းတခြင်းသည် မုအ်မင်န်ကို ဆန်းစစ်ရာတွင် မှတ်ကျောက်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်က ကာဖိရ်တို့၏ ဘ၀ကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
“ကာဖိရ်တို့၏အဖြစ်ကား၊ တိရစ္ဆာန်များကျင့်ကြံသကဲ့သို့ စားခြင်း၊ သောက်ခြင်းဖြင့် လောက စည်းစိမ် ကို မြူးတူးခံစားခြင်းသက်သက်ဖြစ်သည်” (၄၇း၁၂)
ဤနေရာတွင် မုအ်မင်န်၏ခံယူချက်ကို ကုရ်အာန်က –
“မုအ်မင်န်တို့သည် ဤလောက ဘ၀သာမက၊ သေခြင်း၏နောက်ကိုလည်းစဉ်းစားကြသည်၊ သူတို့ သည် အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏ လမ်းညွှန်ချက်ပေါ်တွင် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ကြသည်၊ သူတို့ သည်လျှင် အောင်မြင်သူဖြစ်သည်” ဟု ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူ မွစ်လင်မ်သည် သေခြင်းကို မကြောက်သည့်အပြင် သေခြင်းသဘောကို စိန်ခေါ်လေ့ ရှိသည်။ ဤသို့သေခြင်းကိုမကြောက်ဘဲ အစ္စလာမ်အတွက် အသက်ကိုစွန့်နိုင်သူ၏ အရည် အချင်းကို ကုရ်အာန်က ရှဟာဒတ်ဟုဆိုထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ ရှဟာဒတ်ခံယူသေဆုံးရသူကို ရှဟိဒ် ဟုခေါ် သည်။ ဤရှဟိဒ် အဖြစ်ခံယူရရှိခြင်းသည် အစ္စလာမ့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အလွန်မြင့်မြတ် လှသည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်ကဆိုသည်။ ဤသို့မြင့်မြတ်သော အဆင့် သို့ရောက် ရှိရန် ဂျေဟာဒ်ပြုရမည်။ ဂျေဟာဒ်ပြုရန် ဟိဂျရသ်ပြုရပေမည်။ သို့ဖြစ်၍ ရှဟာဒဒ်၊ ဂျေ ဟာဒ်နှင့် ဟိဂျရသ်တို့သည် ခွဲခြားမရ၊ ဒွန်တွဲနေသည့်ကျင့်စဉ် ဖြစ်ကြောင်း သိသာနိုင် သည်။ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်၏ အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်ကိုလည်း သိထိုက်ပေသည်။
“အသင်တို့သည် ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ အလွယ်တကူဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဟု ထင်မှတ်ကြသလော။ အသင်တို့အရှင်က လူသားမျိုးနွယ်တို့သည် ယင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိရန် ဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံနှင့် ဆင်းရဲ ဒုက္ခ အလုံးစုံကို ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်တွန်းလှန်သည်သာမက တင်းကျပ်ဒုက္ခပေးမှုကို အဖက်ဖက်မှ ၀န်းရံခံခဲ့ရသည်။ ယင်းဒဏ်ကြောင့် နှလုံးပင်တုန်ခဲ့ရသည်။ ထိုအခါတမန်တော်ကိုယ်တိုင်က ကျွန်ုပ် တို့ကြိုး ပမ်းမှု၏ ရလဒ်ကို ဘယ်သောအခါတွင် ရနိုင်မည်နည်းဟု ဆုတောင်းပေးခဲ့ရသည်။ ဤ၍ ဤမျှသော ခက်ခဲမှုကို တွန်းလှန်ပြီးမှသာ ချမ်းရိပ်ငြိမ်သို့ သူတို့ရောက်ခဲ့ရသည်” (၂း၂၁၄)
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က မုဂျာဟစ်၏အရည်အချင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။
“အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏ လမ်းမပေါ်တွင် လှုပ်ရှားခဲ့၍ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းနှင့်ကြုံခဲ့ရ ၍ ဘေး ဒုက္ခဒဏ် ကြောင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခဲ့ရခြင်း၊ ရန်သူတို့၏ ဒေါသအဟုန်ကြောင့် နာကျင်ခံခဲ့ရခြင်း သည် အလဟာသ မဖြစ်စေရပါ။ ယင်းကောင်းမြတ်သောလှုပ်ရှားမှုကို အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်ကမှတ်တမ်း တင်ထားပေသည်” (၉း၁၂၁-၁၂၂)
“မိမိတို့၏ ဥစ္စာ၊ ပစ္စည်း၊ အိုးအိမ်တို့ကို စွန့်လွှတ်၍ အရှင်မြတ်၏လမ်းစဉ်အတွက် ဟိဂျရသ်ပြုခဲ့ သူတို့၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိလာသောအခါ အာမခံချက်ရှိသော ဘ၀၏ ပျော်ရွှင် မှုကို ရရှိပေမည်။ အကယ်၍ ယင်းသူတို့သည်လှုပ်ရားမှုပြုရင်း လမ်းခုလပ်တွင် ကျဆုံးခဲ့လျှင် လည်း အလ္လာ့ဟ်အရှင်ထံမှ သူတို့အတွက် ခံစားရန် ဆုလာဒ်တော်များ ရှိပေသည်”(၄း၁၀၁)
“အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏လမ်းစဉ်၌ ကြိုးပမ်းရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံစစ်ပွဲနှင့်ကြုံ၍ အသက် အန္တရာယ် ဖြစ်လာတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းနှင့် အသက်အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ် ကို စွန့်လွှတ် ရသည်လည်း ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကောက်ပဲသီးနှံများ ဆုံးရှုံးရသည်လည်း ရှိသည်။ ဤသို့သောအန္တရာယ် ကျရောက်ချိန်တွင် ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်၍ အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်အနိုင်ယူသူသာ လျှင် အောင်မြင်သူဖြစ်မည်။ အန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်တွင် လမ်းလွှဲ၊ လမ်းမှားဘက်သို့ ထွက်ပေါက် မရှာဘဲ အရှင်မြတ်ထံတော်မှ လာရောက်ခဲ့ပြီး အရှင်မြတ်ဘက်သို့သာ ပြန်ရမည်ဟု ခံယူရင်ဆိုင်သူ သာလျှင် အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏ ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို လက်ခံရရှိမည့်သူဖြစ်သည်။ (၂း၁၅၅)
ဤနေရာတွင် ကုရ်အာန်က အယောင်ဆောင်မွစ်လင်မ်(၀ါ) မုနာဖိက်၏ လက္ခဏာကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။
“မုအ်မင်န်စစ်မှန်သော ယုံကြည်သူတို့သည် ဂျေဟာဒ်တာဝန်နှင့် ပတ်သက်၍ အစဉ်အမြဲမျှော် လင့်စွာ ဖြင့် အသင့်ပြင်နားစွင့်လျက်ရှိနေကြသော်လည်း အယောင်ဆောင်မွစ်လင်မ် (၀ါ) မုနာဖိက်တို့ ကမူ စစ်မက်ရေးရာ နှင့် ပတ်သက်၍ အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ အမိန့်ကျရောက်လာလျှင် သူတို့ သည် တမန်တော်မြတ်အား မူးလဲကျတော့မည်ကဲ့သို့ ကြောက်လန့်စွာ ငေးမောလျက် ရှိနေတတ် သည်” (၄၇း၂၁)
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်က စစ်မက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်းအကြောင်းကိုလည်း အောက်ပါ အတိုင်း ဖော်ပြ ထားသည်။
“မတရားသခြင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရသူတို့အဖို့ ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခွင့်ကို အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်က ခွင့်ပြုထားသည်။ ယင်းသူတို့သည် မုချအောင်မြင်မှုကို ရရှိမည်။ ယင်းသူတုိ့အား မတရားဖိနှိပ်၍ အိမ်၊ ယာမြေမှ နှင်ထုတ်ခံရခြင်းမှာ သူတို့သည် အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်အား လက်ခံခဲ့၍ ဖြစ်သည်” (၄၇း၂၀)
“အသင်တုိ့သည်အစ္စလာမ် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည့်အတွက် ဖိနှိပ်ဒုက္ခပေး ခံနေ ရသော် အင်အားချည့်နဲ့သူတို့ဖြစ်သည့် ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ရင်သွေးငယ်များအတွက် အ ဘယ်ကြောင့် စစ်မတိုက်ဘဲ ကြည့်နေကြသနည်း၊ ယင်းဖိနှိပ်ခံဘ၀ရောက်သူတို့သည် အလ္လာ့ဟ် အရှင်မြတ် ထံ ယင်းလူယုတ်မာတို့လက်မှ လွတ်မြောက်ရေးရစေကြောင်း အသနားခံနေကြသည်” (၄း၇၅)
ဂျေဟာဒ်ကို လက်တွေ့ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ရာတွင် မွစ်လင်မ်လူထုအဖွဲ့အစည်းဝင်တို့ ပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ ရသော ဗဒရ်စစ်ပွဲသည် အကောင်းဆုံးသက်သေ သာဓကဖြစ်သည်။ မွစ်လင်မ်တို့သည် ၁၃နှစ်တိတိ မက္ကာ့ဟ်မြို့တွင် ကာဖိရ်တုိ့၏ ဖိနှိပ်ဒုက္ခပေးမှုကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် အလူးအလဲခံနေရသည်။ မဒီနာမြို့သို့ ဟိဂျရသ်ပြုခဲ့ရာတွင်လည်း သားတစ်ကွဲ၊ မယားတစ်ကွဲ၊ ဥစ္စာပစ္စည်းနှင့် အိမ်ရာမဲ့ခဲ့ရသော အထီးကျန် ဘ၀ဖြင့် လာရောက်ခဲ့ရသည်။ မွစ်လင်မ်တို့အား အကာအကွယ်ပေးသော မဒီနာမြို့သား အန်ဆွာရီတို့ သည်လည်း သူဌေးသူကြွယ်မဟုတ်၊ လယ်သမားလူတန်းစားများသာဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ မုဟာဂျီရိန်းတို့ အား စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေမှုလောက်သာ ကူညီပေးနိုင်သော အဆင့်ရှိသူဖြစ်သည်။ ဤသို့ လျှပ် တပြက် ထိုးစစ်ကို ခံရတော့မည့်အခြေအနေကြောင့် မွစ်လင်မ်တို့သည် တုန်လှုပ်ခဲ့ရသည်။ မွစ်လင်မ် တို့သည် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေချိန်တွင် ကုရ်အာန်၏ အောက်ပါ လမ်းညွှန်ချက် သည် ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။
“အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့် အခွင့်အလမ်းရှိသူသည်လည်း တိကျသော အသက်ရှင်ခွင့်ရရှိရေး အတွက် သက်သေပြ၍ နေထိုင်လော့၊ အသက်ရှင်ခွင့်မရှိသောသူတို့သည်လည်း ထင်ရှားသော သက်သေ သာဓကဖြင့် သေခြင်း၏ ရင်ခွင်သို့ ၀င်ရောက်လော့” (၈း၄၂)
ကုရ်အာန်သည် မွစ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့အား စိုးရိမ်ကြောက်လန့် တုန်လှုပ်စွာ အသက်ရှင်နေ ထိုင်ခွင့် ကို အချည်းအနှီးဘ၀အဖြစ် ဖော်ပြသည်။ လူ့လောကတွင် အညဉ်းပန်းလည်း မခံနှင့်၊ ညဉ်းပန်းမှု လည်းမပြုနှင့် ဟုတားမြစ်သည်။ လွတ်လပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသက် ရှင်နေထိုင်ခွင့် အတွက် ထင်ရှားသော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် အသက်ရှင်ခွင့်ကို ရှာကြံရမည်ကို ပြဆိုသည်။ ဤအတွက် အခွင့် အလမ်း ကိုလည်း လမ်းညွှန်သည်။
“အသင်တို့သည်မိမိတို့ ၏ ကာကွယ်ရေး အတွက် ပြင်ဆင်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ပြုထားကြလော့။ မိမိတို့ နယ်မြေ ကို အင်အားသုံး၍ စောင့်ရှောက်ကြလော့၊ သို့မှသာ အသင်တို့၏ ရန်သူနှင့် အလ္လာ့ဟ်၏ ရန်သူတို့သည် ကြောက်ရွံ့ ကြမည်။ သို့ဖြင့် အသင်တို့အား တိုကခိုက်ခြင်းမပြုမည်မဟုတ်” (၈း၆၀)
ဤနေရာတွင် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ စူရာဟ်“အလ်ဗလဒ်” သည် ဂျေဟာဒ်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိပ် သည်း စွာ ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
“အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်သည်လူသားတို့အား နှစ်ခုသောလမ်းကိုပြထားသည်။တစ်ခုကား တစ် ကိုယ်ကောင်း သမားနှင့် လောကီဇိမ်ခံသူတို့၏ အချောင်ခိုသောလမ်း . . . .
ကျန်တစ်ခုကား မတ်စောက်သော တောင်ခါးပန်းသို့ တတ်လှမ်းရသောလမ်း၊ ယင်းလမ်းကြောင်းသည် ခက်ခဲပင်ပန်းရသည်မှန်သော်လည်း ခြေလှမ်းလှမ်း လှမ်းတိုင်းမြင့်မားသော အဆင့် သို့ ရောက်သည့် နည်း တူပင် ယင်းလမ်းကား . . .
၁) . အချုပ်ချယ်ခံနေရသောသူတို့အားလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကြိုးပမ်းခြင်း။
၂) . ငတ်ပြတ်ဒုက္ခရောက်နေသော သူတို့အား အစာဖူလုံမှုအတွက်လည်း ကြိုးပမ်းခြင်း။
၃) . လူ့အဖွဲကအစည်းအချင်းချင်း ဒုက္ခရောက်နေရသော ခိုကိုးရာမဲ့တို့အရေးကိုဖြေရှင်းပေးခြင်း။
၄) . အလုပ်ကိုကြိုးစားပမ်းစားလုပ်နေပါလျက် ပြည့်ဝသော လူ့အခွင့်အရေးကိုမရကြသူတို့အား ကယ် တင်ခြင်း”
“အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အားဖိနှိပ်ဒုက္ခပေးနေသော လူယုတ်မာတို့ အား တားဆီး တွန်းလှန်ခြင်းမပြုဘဲ လျစ်လျူရှုခဲ့လျှင် ဤကမ္ဘာလောကကြီးသည် ဒုစရိုက်သမားတို့၏ လုပ် ရပ်ကြောင့် မှောင်မိုက်သွားလိမ့်မည်”(၂း၂၅၁)
“အသင်တို့သည် ယင်းလူယုတ်မာတို့အား တိုက်ခိုက်ကြလော့။ အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်သည် အသင်တို့အားဖြင့် ယင်းလူတို့အား ဒဏ်ခတ်တော်မူသည်။”(၉း၁၄)
ကုရ်အာန်ကလမ်းညွှန်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် စစ်နှင့် ပတ်သက်သော စည်းကမ်းချက်များ –
အသင်တို့အား စစ်မက်တိုက်ခိုက်သူတို့အား ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရင်ဆိုင်ချေမှုန်းလော့၊ သို့ရာတွင် စစ်ကို ကျူးလွန်သောအခြေအနေ မရောက်ပါစေနှင့်၊ အကန့်အသတ်ဖြင့်ပြုကြလော့။ (၂း၁၉၀)
စစ်ဖြစ်သော ဒေသတွင် စစ်နှင့်မပတ်သက်သော လယ်ယာပစ္စည်းများ၊ လူနေဒေသများကို ဖျက်ဆီးခြင်း မပြုပါနှင့်၊ ယင်းသည် အချည်းအနှီးသောပျက်စီးမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ယင်းအပြုအမူကို အလ္လာ့ဟ်အရှင် မကြိုက်မနှစ်သက်ချေ။ (၂း၂၀၅)
သိမ်းပိုက်မိသော နယ်မြေကိုဖျက်ဆီးခြင်းလည်းမပြုလေနှင့် ထိုဒေသရှိအပြစ်မဲ့သောပြည် သူတို့အား အရှက်တကွဲ နှိပ်စက်ခြင်းလည်းမပြုပါနှင့် (၂၇း၃၄)
စစ်တိုက်ခိုက်သော ကာလအတွင်း စစ်မဲ့ရက်အချို့နှင့် နေရာအချို့ကို စစ်မဲ့ဇုန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါ။ ဤသို့ဖြစ် စစ်မဲ့ကာလတွင် စစ်နှင့်ပတ်သက်၍သုံးသပ်မှုပြုနိုင်မည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး အ တွက် ပြင် ဆင်မှုလည်း ပြုနိုင်မည်။ ထို့အတူ စစ်မဲ့ဇုန်ဒေသတွင် အပြစ်ကင်း စင်သော ပြည်သူတို့အား ခိုလှုံခွင့် ပြုနိုင်သည်။ (၂း၂၁၇)
ရန်သူတို့က ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လက်ဆင့်ကမ်းလာလျှင် အသင်တို့သည် လက်ဆင့်ကမ်းပါ၊ သို့ရာတွင် သတိဝိရိယရှိစွာဖြင့် ရန်သူကို အကဲခတ်ပါ။ (၈း၆၁)
လူမျိုးတစ်မျိုးအား မုန်းတီးမှုသည် ယင်းသူတို့အား မတရားသဖြင့် ဖိနှိပ်ရန်သွေးဆောင်မှု မဖြစ်ပါစေနှင့်၊ တရားနည်းလမ်းမှန်ဖြင့် ပြုကြလော့။ အကြောင်းမူ အသင်တို့ သည် ဖြောင့် မတ်သူများဖြစ်၍ ဖြောင့်မတ်သူတို့၏ နည်းလမ်းသည် ဤသို့ဖြစ်သည်။ (၅း၈)
စစ်သုံ့ပန်းတို့အား လျော်ကြေးယူ၍လည်းကောင်း၊ မယူဘဲလည်းကောင်း လွှတ်လော့၊ ရန်သူ ဘက် သား တို့ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံလျှင် လက်ခံလော့၊ ယင်းသူတို့အား ကုရ်အာန်၏ လမ်းညွှန် ချက်ကို ရှင်းပြလော့၊ သူတို့သည် နေရပ်ဌာနသို့ ပြန်လိုလျှင်လည်း ပြန်ခွင့်ပြုလော့။ (၄၇း၎)
ရန်သူတို့နှင့်တကွ အခြားသူတို့နှင့် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်ကို လေးစားမှုပြုရန် ကုရ်အာန် (၅း၁) တွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်။ ရန်သူတို့သည် ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်နောက်ကွယ်တွင် မကောင်းသော အပြုအမူကိုပြုလုပ်လာလျှင် ယင်းမကောင်းမှုကို မကောင်းမှုနှင့် မတုန့်ပြန်နှင့်၊ သူတို့ ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်ကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းသည် အကောာင်းဆုံးဖြစ်သည်။ (၈း၅၈)
စစ်မက်လိုလားသော အုပ်စု၏ အင်အားကို လုံးဝချိနဲ့သွားအောင်ပြုရခြင်းမှာ ယင်းသူတို့ နောက် ထပ် မတရားသဖြင့် မပြုကျင့်ရန်ဖြစ်သည်။ (၄၇း၎)
10. အသင်တို့သည် ရန်သူ၏ထိုးနှက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရလျှင်လည်း စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းမရှိဘဲ ယင်းထိုးနှက်ခြင်း ၏ ဇစ်မြစ်ကို ရှာဖွေလော့။ (၃း၁၃၉)
11. အသင်တို့သည် ရန်သူအားကျောပေး၍ ထွက်ပြေးခြင်းမပြုနှင့်၊ ယင်းသူတို့အပေါ် အလ္လာ့ဟ် အရှင်မြတ် ထံမှ ဘေးဒုက္ခများ ကျရောက်မည်။ သို့ဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုအတွင်း ရောက်ရှိမည်။ (၈း၁၅-၁၆)
မွစ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင်တို့အား ကုရ်အာန်၏ သတိပေးချက် –
“အို- ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ သင်တို့သည် တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအရ လည်းကောင်း၊ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာလျှင် ကျရောက်လာသော ဘေးရန်ကို တွန်းလှန်ရန် ကြိုးပမ်းလော့၊ ယုံကြည်ခြင်းအရာတွင်ခိုင်မြဲကြလော့၊ အရှင်မြတ်၏တာဝန်ကို တသွေမတိမ်း ထမ်းဆောင်လော့။ သို့မှသာ အောင်ပွဲကို ဆွတ်ခူးနိုင်မည်။
“အမှန်သော်ကား အကြင်သူသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များကိုလည်းကောင်း၊ ရစူလ်ကိုယ်တော်မြတ်(ဆါ)၏ အမိန့်တော်များကို လည်းကောင်း လိုက်နာအံ့၊ ယင်းကဲ့သို့သော သူတို့သည် အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်ကျေးဇူးတော်ပြုသော နဗီတမန်တော်များ ဆွစ်ဒီက်တိကျမှန် ကန် စွာ ပြောဆိုဆောင်ရွက် သူများ၊ “ရှဟိဒ်” အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏ လမ်းတော်၌ အသက်ဇီဝိန်ကို စွန့်လှူ သူများ၊ “ဆွာလိဟ်” သူတော်စဉ်သူတော်ကောင်းများနှင့်အတူတကွ ရှိကြလတ္တံ၊ စင်စစ်ဆိုသော် ယင်းသူတို့သည် အဘယ်မျှလောက် မွန်မြန်လှစွာသော မိတ်သဟာယ အဖော်အဖက် များ ဖြစ်ကြပေ သနည်း” (၄း၆၉)
အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များအနက်မှ ရှဟီဒီ အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်လမ်းတော်၌ ကြိုးပမ်းအားထုတ်သူများ အသက် ဇီဝိန် ကို စွန့်လှူသူများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ထူးခြားသည့် အဆင့်အတန်းများ ရှိကြောင်း ကိုလည်း ကုရ်အာန် ကျမ်းမြတ်၌ ဖော်ပြထား၏။
“ထို့ပြင်တ၀ (အို-မွစ်လင်မ်အပေါင်းတို့) အသင်တို့သည် အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏ လမ်းတော်၌ အသတ်ဖြတ်ခံရသူတို့ကို လူသေများဟု မပြောဆိုကြကုန်လင့်။ (ယင်းသူတို့သည် လူသေများ) အလျဉ်း မဟုတ်၊ စင်စစ်မှာမူထိုသူတို့သည် အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏ ထံတော်၌ အသက်ရှင်လျှက် ပင်ရှိကြလေ ၏။ သို့ရာတွင် အသင်တို့သည် (ထိုအကြောင်းကို) တွေးဆဆင်ခြင် မသိမမြင်နိုင်ကြချေ။” (၂း၁၅၄)
သာသနာ့အာဇာနည်တို့သည် ခေတ်အဆက်ဆက်၌ ပေါ်ထွန်းမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါသာသနာ့ အာဇာ နည်လောင်း အလျာတို့သည် မြင့်မြတ်သည့် အဆင့်အတန်းကို ရရှိမည့်အကြောင်းကိုလည်း ကျမ်းတော်မြတ် ဤ ဆိုထား၏။
“၄င်းအပြင် (အိုနဗီတမန်တော်) အသင်သည် အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏ တရားလမ်းတော်၌ (စစ်တိုက်စဉ်) အသတ်ခံရသော သူတို့ကို သူသေများဟူ၍ အလျဉ်းမထင်မှတ်လေနှင့်။ (ထိုသူတို့ကား သူသေများ) အလျဉ်းမဟုတ်၊ စစ်စစ်မှာကား ထိုသူများသည် ၄င်းတို့၏ အရှင်မြတ်ထံတော်ဝယ် အသက် ရှင်နေသော သူများပင် ဖြစ်ကြသည့်အပြင် (အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်၏) ကျွေးမွေးခြင်းကိုလည်း ခံကြရကုန် ၏။” (၃း၁၆၉)
“ထိုသူတို့သည် ၄င်းတို့အား အလ္လာ့ဟ်အရှင်မြတ်က မိမိစည်းစိမ်ချမ်းသာ အကျိုးကျေးဇူးတော်ကို ချီးမြှင့်ပေး သနားတော်မူသောကြောင့် နှစ်ထောင်းအားရ ရွှင်လမ်းလျက်ရှိကြသည်သာမက မိမိ တို့နောက် ၌ (ကျန်ခဲ့သော) မိမိတို့နှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံ ပူးပေါင်းခြင်းမရှိသေးသော သူတို့နှင့် ပတ် သက်၍ လည်း ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ပျော်ရွှင်ကြကုန်သည်။ အကြောင်းတစ်မူကား ထို(ကျန်ရစ်သော) သူတို့အဖို့မှာလည်း (မိမိတို့ထံ ရောက်ရှိလာကြသောအခါ) မည်သို့မျှ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းလည်း မရှိကြောင့်ပင်တည်း။” (၃း၁၇၀)
ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ် အလင်းပြကျမ်း၌ ရှဟိဒ် ဟူသည်မှာ အမြဲတစေ အသက်နှင့်ပင် အရှင့် ထံတော်ပါး၌ ရှင်နေကြကုန်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဆိုထား၏။ ၄င်းအပြင် “ရှဟီဒီများ အသက် ရှင်လျှက်ရှိကြကုန်၏” ဟု မိန့်ဆိုထားခြင်း၏ သဘောမှာ “အခွင့်အရေးအားဖြင့် ရှင် သူများ ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ကြကုန်၏၊ အကျင့်သီလများ၏ ကုသိုလ်အကျိုးသည်လည်းပြတ်ဆဲသည် မရှိပေ” စသည်ဖြင့် အကျယ်တ၀င့် ဖွင့်ဆိုထားကြောင်း တွေ့ရ၏။
အတိတ်ခေတ်ရှိမြောက်မြားစွာ သုခမိန်တို့၏ ယူဆချက်မှာ ထိုရှင်ခြင်းသည် ဥပစာမဟုတ်၊ မုချဖြစ် သည်(၀ါ) ရုပ်နှင့် နာမ်ပေါင်းစပ်လျက်ရှိသော ရှင်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ အချို့ပညာရှင်တို့၏ ယူဆချက်မှာ ထိုရှင်ခြင်းသည် နာမ်သဘောအားဖြင့်သာဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်သည် မျက်ကန်းစစ် ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒနှင့် မျက်ကန်းငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒ (Blind Pacifism) ကို မပြညွှန်ပါ။ အကြမ်းဖက်ဝါဒကို စွန့်လွှတ်လာရေးအတွက် စစ်ရေးအရ ဖြေရှင်းရန် တာဝန်ရှိကြောင်းကို ပြဆိုထားပါသည်။
“စစ်မက်ပြိုင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ခြင်းကို အသင်တို့က ရွံရှာစက်ဆုပ်လေငြားလည်း အသင်တို့အတွက် ဖရာဇ်အဖြစ် ပြဌာန်းထားသည်။ သို့သော် အသင်တို့ စက်ဆုပ်ရွံမုန်းရာတွင် အသင်တို့အတွက် အကောင်း ဖြစ်ရာ တန်၏။ အလားတူ အသင်တို့နှစ်သက်နေရာ တစ်စုံတစ်ရာက အသင်တို့အဖို့ အဆိုးဖြစ်တန်ရာလည်း ရှိ၏။ အလ္လာ့ဟ်ကား သိတော်မူပြီး အသင်တို့သည်ကား သိနားလည်ကြသည်မဟုတ်ချေ” (၂း၂၁၆)
ဘာသာတရားတွင် အဓမ္မမှုကို အစ္စလာမ်က မလိုလားချေ။ ဤအတွက်ကြောင့်ပင် မွစ်လင်မ်တစ်ဦးသည် ဤအလ္လာဟ်အပေါ် လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ချက် ကိုးကွယ်မှုဟူသော လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့် ထိန်းဖို့ လိုသည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လာပါက အနုနည်းနှင့် မရပါက အကြမ်းနည်းဖြင့် ရက် ဆိုင်ကြ ရပါသည်။
ကုရ်အာန်က စစ်ကို ခွင့်ပြုထားရုံမက တာဝန်အဖြစ်ကို ပြဌာန်းထားသည်ကို သတိချပ်ရာ၏။ ဤနေရာ၌ “ဘာသာရေးအရ ချုပ်ချယ်လာလျှင်၊ မတရားဖိစီးညဉ်းပမ်းမှုရှိလာလျှင် စစ်ရေးအရ ရင်ဆိုင်ကြ” ဟုဆို ထားပြီး၊ နိုင်ငံရေးသြဇာတည်ဆောက်ရန်၊ စီးပွားရေးအရ သြဇာယူရန်၊ မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒ ကျင့်သုံး ရန်နှင့် သဘာဝ သယံဇာတအရင်းအမြစ်များကို လက်ဝါးကြီးအုပ် မောင်ပိုင်စီးထားရန်တို့ကို ခွင့်မပြု ထားချေ။ ကုရ်အာန် (၄း၇၅) တွင် မြို့ရွာဒေသတစ်ခုတါင် အားမသန်သော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များနှင့် ကလေးသူငယ်တို့အား မတရားနှိပ်စက် ညဉ်းပန်းခံနေရပါက သူတို့အား အကာအကွယ်ပေးမည့် မိတ်ဆွေကို ရရှိရေးနှင့် ခုခံကာကွယ် ပေးမည့်သူများ ရှိလာရေးကို ဆုပန်လာသူများအတွက် အလ္လာ့ဟ် လမ်း၌ “စစ်မက်ရင်ဆိုင်တိုက်ကြ” ဟု ဆိုထားပေသည်။ ဤအာယသ်တော်အရ မွစ်လင်မ်တို့တွင် အဖိနှိပ် ညဉ်းပန်းခံ အမျိုးသားများအတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်ကြခြင်းကို “အလ္လာ့ဟ်လမ်း၌ တိုက်ပွဲဝင်ခြင်း” ဟု ကုရ်အာန်က ဆိုထားသည်။ လောကီရေးရာသက်သက် အတွက် စစ်ရေးဆင်နွှဲခြင်းကိုမူ အစ္စလာမ်က လုံးဝ တားမြစ်ထားချေ၏။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို စောင့်ထိန်းကာကွယ်ရာတွင် အလ္လာ့ဟ်ရှင်အပေါ် လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်က ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းအတွက် စစ်မက်ပြုကြသူတို့ကို ကုရ်အာန် (၅း၃၃) အရ သေဒဏ်နှင့် ပြည်နှင်ဒဏ်အထိ ကြီးလေးသော ပြစ်ဒဏ်ပေးကြဟုဆိုထားသည်။ ဤသို့သော စစ်မျိုးကို တားဆီးကြရမည်။ ငြိမ်းချမ်ရေးကိုဝစီကံအရသာမက၊ ရရာနည်းလမ်းစုံနှင့် ကြိုးပမ်း ဖို့ ကုရ်အာန်က ဆိုထားသည်။ အကြမ်းဖက်သူများနှင့် မတရားကျူးလွန်ကြသူများအတွက် တတ်စွမ်းသမျှ အင်အားကို လည်းကောင်း၊ မြင်းများကိုလည်းကောင်း၊ ရန်သူတို့ ကြောက် လန့် သွားအောင် ပြင်ဆင်ထားကြဟု (၈း၆၀)တွင် ဆိုထားသည်။ ပိဋိညာဉ်ချုပ်ခြင်းဖြင့် စစ်ရေးအရ မတိုက်ခိုက်ရလေအောင်လည်း ကုရ်အာန်၏ နေရာများစွာတွင် ညွှန်ကြားထားသေးသည်။
နိဂုံးချုပ် ဆိုရပါသော် ဘာသာတရားတွင် အဓမ္မမှု ရှိလာခဲ့လျှင် –
© မတရား ညဉ်းပမ်း ဖိစီးနှိပ်စက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်၊
© ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ရပ်တည်ရန်။
© မသမာသည့် အမှုများတွင် လက်နက်စွဲကိုင်လာမှုကို ဟန့်တားရန်။
© ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ် ဂျေဟာဒ်ကို ဆင်နွှဲရာ၏။
© ကိုယ်ကစပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်းအား တားမြစ်ထားပြီး၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ရန်အရေးကိုမူ အစ္စလာမ်က ခွင့်ပြုထားရုံမက၊ ရနိုင်သမျှ နည်းလမ်းစုံသုံးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရယူနိုင်ရန်လည်း ဆိုထားပါသည်။
စကောတလန် မြို့လယ်ဗလီ အတွင်း လူမျိုးရေးစော်ကား၊ ခြိမ်းခြောက်သူ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံရ
Posted on December 29, 2012 by musliminfoburma
စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့က အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဖရေစာရေးသည် ဂလပ်စဂို မြို့လယ် ဗလီအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ဗလီအတွင်းရှိလူများအား ထွက်ပြေးခိုင်းခဲ့သည် ဟု အစိုးရ ရှေ့နေ (တရားလိုရှေ့နေ) များကပြောပါသည်။
စကော့တလန် နိုင်ငံ ရန်ဖရူးရှိုင်းယားပြည်နယ် ဂျွန်စတုန်းမြို့သား ရေး သည် သူ့တွင် သေနတ်ပါကြောင်း အော်ဟစ်ပြီး၊ အနီးရှိလူများအား ပစ်ခတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြောင်း ဖြစ်သည်။
အချင်းဖြစ် နေရာ၌ သူ့အား ဖမ်းဆီး ရမိပြီးနောက် ကျောပိုးအိတ်ထဲ ရှာဖွေရာ ကပ်ကျေး၊ လက်အိတ်၊ ရုပ်ပြောင် မျက်နှာဖုံးစွပ် အပါအ၀င် ပစ္စည်းမျိုးစုံ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခင်းဖြစ်ပွားစဉ် ၄င်းအနေဖြင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု နှင့် ခြိမ်းခြောက်မှု အကြောင်းအရာများ အော်ဟစ် နေခဲ့သေးသည်။
ယနေ့ ဂလပ်စဂို စီရင်စု တရားရုံးတွင် ရေးအား သူ၏ စောစီးစွာ ဝန်ခံမှုကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၂နှစ်နှင့် ၄လ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း ဘုရင့်ရုံး (Crown Office) က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသည်။
သူ့အနေဖြင့် သူ့ပေါ်စွဲဆိုသော အကြမ်းဖက်လိုသော အမူအရာနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဓါးကိုင်ဆောင်မှုတို့ကြောင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံသည်။
ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ပြီးနောက် အနောက် စကော့တလန် အစိုးရရှေ့နေ ဂျွန်ဒွန်းက “လူတိုင်းတွင် အခြား လူတဦးတယောက်၏ အမှန်မစူးစမ်းဘဲ မလို မုန်းထားခြင်းကြောင့် အကြမ်း ဖက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်၊ ခြိမ်းခြောက်မှု (သို့) နှောက်ယှက်မည်ဟု စိုးရိမ်မကင်းမှု (သို့) နှုတ်ပိတ်မှု စသောအမှုများမှ လွတ်ကင်းစွာ နေထိုင်နိုင်သည့် အခွင့်အရေး ရှိသည်” ဟု ပြောပါသည်။
“အသားအရောင်၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာအပေါ် အဓိကထား လုပ်ဆောင်မှုများကို လုံးဝ လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါ။ ဒီ ဖရေစာရေး ရဲ့ ဝန်ခံမှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုတွေက ဘယ်လို လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုမျိုးကိုမဆို တိုင်ကြားဖို့ ပြည်သူလူထုကို အားပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။”
“ဒီလို ပြစ်မှုတိုင်းကို ဂရုတစိုက် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ထိရောက်စွာ တရားစွဲဆို အရေးယူကြောင်း သူတို့တွေ ယုံကြည်မှုရှိရမယ်။”
Strathclyde ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မှုခင်းစုံထောက် ဂျိုးမက်ကန်းစ်က “ဒီလူရဲ့လုပ်ရပ်က လူအများကို အထိတ်တလန့်ဖြစ် ကြောက်ရွံ့စေတယ်။”
“ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုမျိုး လူနည်းစု အဖွဲ့အစည်းတွေကို အဓိကထားပြီး ကျူးလွန်တဲ့ ဘယ်အပြုအမူကိုမှ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်သလို ဘယ်လောက်ပဲ သေးငယ်တဲ့ ပြစ်မှု ဖြစ်ပါစေ ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ မဆိုင်းမတွ ဆောင်ရွက်ပါမယ်။”
“ဘယ်သူမျှ ပြစ်မှု ပုံစံမျိုးစုံရဲ့ ဓါးစာခံ မဖြစ်စေရဘူး။ ဒီလို အမှုမျိုးတွေဟာ အမြန်ဆုံး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်။” ဟုပြောပါသည်။
အိုလမာ ပညာရှင်များသည် တမန်တော်များ၏ အမွေခံများဖြစ်ကြသည်
(အိုလမာ)ပညာရှင်များသည် တမန်တော်များ၏ အမွေခံများဖြစ်ကြသည်
by Myo Tint Than
ဘာသာရေးလေးစားသည်မှာ ကောင်း၏။ ဘာသာရေးပညာကို သင်ယူဆည်းပူးသည်မှာလည်း ကောင်း၏။ သို့သော်ယခုခေတ် ဘာသာရေးလေးစားသူများ ၊ဘာသာရေးပညာကို သင်ယူ ဆည်းပူးသူများ ၊ ဘာသာရေးပညာတတ်များက ခေတ်ပညာများကို မသင်ကောင်းသည့်အလား ထင်မြင်၊ယူဆ ၊ဟောပြော၊ ဖြန့်ချီနေကြ သည်မှာ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ မှတ်တမ်းများနှင့် လွဲချော်နေပါသည်။
ယခုခေတ်ပညာများသည် ယဟူဒီ/နစွာရာနီတို့၏ ပညာများမဟုတ်။ တမန်တော်သခင်များ တတ်သိခဲ့သောပညာ များသာဖြစ်ကြောင်း ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ် အထောက်အထားများနှင့် တင် ပြလိုက်ပါသည်။ ထင်ရှားသော ဟဒီးဆ်တော်အရ ခေတ်ပညာများကို သင်ယူဆည်းပူးတတ်ကျွမ်းလျှင် တမန်တော်သခင်များ၏ အမွေရ သည်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေတင်ပြ လိုက်ပါသည်။
“အမှန်ပင် (အိုလမာ)ပညာရှင်များသည် (အန်ဘီယာ) တမန်တော်သခင်များ၏ အမွေခံများ ဖြစ်ကြသည်။ (တမန်တော်မြတ် သခင်၏ သြ၀ါဒတော် ၊ အဟ်ကားမ်ကျမ်း) သြ၀ါဒတော်များအရ တမန်တော်မြတ်သခင် ညွှန်ပြသော (အိုလမာ)ပညာရှင်များမှာ မည်သည့်(အိလ်မ်)ပညာများ တတ်မြောက်ကြသူများနည်း။ မည်သည့် တမန်တော်သခင်သည် မည်သည့်(အိလ်မ်)ပညာကို တတ်မြောက်ခဲ့သနည်း။ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ထဲမှာ အဖြေရှာရပါမည်။
(၁)ဖခင်ကြီး တမန်တော်အာဒမ်သခင် (Adam)
(အလ္လာဟ်သည်) အာဒမ်အားအရာအားလုံး၏ အမည်များကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။(၂:၃၁)
ထို့နောက်၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် မိမိတို့ကိုယ်အပေါ် ဂျန္နသ်မှသစ်ရွက်(များ)ဖြင့် စတင်ဖုံးအုပ် ခဲ့ကြ ၏။…(၇း၂၂)
ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်အာဒမ်သခင်သည် သက်ရှိသက်မဲ့ဒြပ်ရှိ ဒြပ်မဲ့အရာအားလုံး၏ အမည် နာမ (Definition) ၊ အချုပ်အလုပ်ပညာ (Tailoring) တို့ကို တတ်သိခဲ့သည်။
-၄င်းပြင်သင်သည် ငါအရှင်မြတ်၏ မျက်စိအောက်တွင် ငါအရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်အရ သင်္ဘောတည်ဆောက်ပါလေ၊ …(၁၁း၃၇)
-ထို့နောက် (ထိုတမန်တော်နူးဟ်သခင်)သည် သင်္ဘောတည်ဆောက်လေ၏။ . . .(၁၁း၃၈)
-၄င်းနောက် ထိုသင်္ဘောသည် ၄င်းတို့ကိုတင်ဆောင်၍ တောင်ကြီးများပမာကြီးမားလှသော လှိုင်းတံပိုးကြား ၀ပ်တွားလျက် ရှိသည်။…(၁၁း၄၂)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်နူးဟ်သခင်သည် သင်္ဘောဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာအတတ် ပညာ (Ship Building Engineering) နှင့် ရေကြောင်းအတတ် ပညာ (Marine Science) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
-ထို့ပြင်တစ်ခါက အစ်ဘရာဟီးမ် နှင့် အစ္စမာအီးလ်တို့သည် အိမ်တော်၏ကျောက်နံရံကို မြှင့်တင်နေစဉ် . . .(၂း၁၂၇)
-ထိုသူ၏အရှင်နှင့်ပတ်သက်၍ အစ်ဘရာဟီးမ်နှင့် အငြင်းအခုံပြုခဲ့သူ (ဘုရင်)ကို အသင်မမြင်ခဲ့လေသလော . . .(၂း၂၅၈)(၆း၇၄/ ၁၉း၄၁-၅၀/ ၆း၈၀-၈၃ တွင်လည်းကြည့်)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါဤမှတ်တမ်းများအရတမန်တော် အစ်ဘရာဟီးမ်သခင်သည် အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ (Civil Engineering) ၊ လျှောက်လဲပြော ဆိုတတ်သော အတတ်ပညာ (Argumentation) ၊ စကားပြော/ တရား ဟော အတတ်ပညာ(Eloquent Art/Preaching Art) တို့ကို တတ် သိခဲ့သည်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ (၂း၁၂၇)မှတ်တမ်းအရ၊တမန်တော်အစ္စမာအီးလ်သခင်သည်လည်းအဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ၊ဗိသုကာအတတ်ပညာ (Civil Engineering , Architecture) ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
.. .၄င်းပြင် ငါအရှင်သည်ထိုသူ(ယူစွဖ်)အားစကားများ၏အနက်သဘောကို သင်ကြားပြသရန်. . .(၁၂း၂၁)
(ယူစွဖ်က) (အရှင်မင်းကြီးသည်) ကျွန်ုပ်အားတိုင်းပြည်၏ ဘဏ္ဍာတော်များအပေါ်၌ (ကြီးကြပ်အုပ်ထိန်းသူအဖြစ်) ခန့်အပ်ပါလေ၊ အမှန်ပင်ကျွန်ုပ်သည် ထိန်းသိမ်းနိုင် သူ၊အသိပညာနှင့် ပြည့်စုံသူဟု ပြောခဲ့လေ၏။(၁၂း၅၅)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်ယူစွဖ်သခင်သည် စီးပွားစီမံမှုအတတ်ပညာ (Economic Management) ၊အုပ်ချုပ်မှုအတတ်ပညာ (Administrative Art) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
-…၄င်းပြင်သူ(မူစာ)အရွယ်ရောက်ပြီးအသိဥာဏ်ရင့်သန်လာသောအခါ ငါအရှင်သည်သူအား ဥာဏ်အမြော်အမြင်နှင့်အသိ ပညာကိုပေးခဲ့၏။
-…ထိုအခါမူစာသည် ထိုသူကို လက်သီးဖြင့်ထိုးအဆုံးစီရင်လိုက်လေသည်။. . .(၂၈း၁၅)
-…သင်သည်တိုင်းပြည်တွင်ရက်စက်စွာ အုပ်ချုပ်လိုသူဖြစ်ရန်သာလျှင် အလိုရှိပေသည်။ . . .(၂၈း၁၉)
-. . .၄င်းပြင်အရှင်မူစာအား ကျမ်းဂန်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့လေသည်။ . . .(၁၁း၁၁၀)
– . . .(မူစာက) ဟဲ့ (တရားခံ) စာမရီ၊မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ . . . (၂၀း၉၅)
-…(မူစာက)(တရားခံစာမရီအား)သင်ထွက်သွား၊သင်သည် ဤဘ၀တွင်မည်သူနှင့်မျှ ထိတွေ့ခြင်းမရှိရဟု ပြောရမည်ဟု (စီရင်ချက်ချမှတ်)ပြောခဲ့သည်။ . . .(၂၀း၉၇)
-ထို့ပြင်ကျွန်တော်၏လျှာမှ အထုံးကိုဖြေပေးတော်မူပါ။ကျွန်တော့်စကားကို နားလည်စေကြရန်(ဖြစ်ပါသည်)။ . . .(၂၀း၂၆-၂၇)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်မူစာသည် လက်ဝှေ့/သိုင်း/တိုက်ခိုက်မှု အတတ်ပညာ (Boxing/ Martial Art)၊ အုပ်ချုပ်ရေးအတတ်ပညာ (Administrative Art) ၊ဥပဒေပညာ(Law) ၊ တရားစီရင်ရေး အတတ်ပညာ (Judicial Art) စကားပြောအတတ်ပညာ (Eloquent Art) တို့ကို တတ်သိခဲ့သည်။
-. . .၎င်းပြင်ကျွန်တော်(မူစာ)၏အိမ်ထောင်စုသားအနက်မှ ကျွန်တော့်အတွက် ၀ဇီးရ်(၀န်ကြီး/ကူညီသူ)ပြုလုပ်ပေးပါ။ ကျွန် တော်၏နောင်တော် ဟာရူန်အား။ . . .(၂၀း၂၉-၃၀)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါဤမှတ်တမ်းအရ တမန်တော် ဟာရူန်သခင်သည် အုပ်ချုပ်ရေးအတတ်ပညာ(Administrative Art) ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
-. . .ထို့ပြင် ဒါဝူးဒ်နှင့်စုလိုင်မာန် တို့သည် လယ်ယာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီရင်ဆုံးဖြတ်ကြကုန်၏။. . . (၂၁း၇၈)
– ၎င်းပြင် ငါအရှင်သည် ဒါဝူးဒ်အား သင်တို့အကျိုးငှာသံချပ်အင်္ကျီပြုလုပ်သော အတတ်ကိုသင်ပေးခဲ့၏။ သင်တို့စစ်တိုက် ရာတွင် သင်တို့ကို ကာကွယ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။. . .(၂၁း၈၀)
– . . .အမှန်ပင်ငါအရှင်သည် ဒါဝူးဒ်အား မိမိထံမှ ကျေးဇူးတော်ကို ပေးသနားခဲ့၏။အိုတောင်တို့ အသင်တို့သည် ဒါဝူးဒ်နှင့်အတူ ငါအရှင်စင်ကြယ် သန့်ရှင်းတော် မူကြောင်း သီဆိုကြ၊ ထို့အတူငှက်များလည်း(သီဆိုကြ)၊ထို့ပြင် ဒါဝူးဒ်အဖို့ ငါအရှင်သည် သံကို ပျော့ပျောင်းစေတော်မူ၏။
. . .ဒါဝူးဒ်သည် ဂျာလူးဒ်ကိုကွပ်မျက်ခဲ့၏။ထို့နောက်အရှင်သည် ဒါဝူးဒ်အား အာဏာ၊ဥာဏ်ပညာနှင့် သူအလိုရှိသောပညာ တို့ကိုသင်ပေးခဲ့၏။ . .. (၂း၂၅၁)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်ဒါဝူးဒ်သခင်သည်တရားစီရင်ရေးအတတ်ပညာ(Judical Art)၊ သံချပ် ကာအင်္ကျီအတတ်ပညာ(Coat of Mail Making Art) ၊ဥပဒေပညာ(law)၊အုပ်ချုပ်ရေးပညာ(Administrative Art)၊အဆို၊ဂီတ ပညာ (Music and Singing Art) ၊သိုင်း/တိုက်ခိုက်မှုအတတ်ပညာ(Martial Art) ၊ သံထည်(သတ္တု အင်ဂျင်နီ ယာ အတတ် ပညာ) (Meatl Engineering) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
-ထိုအခါငါအရှင်သည် စုလိုင်မာန်အားယင်းအမှု၏(အဆုံးအဖြတ်)ကိုသိနားလည်စေခဲ့၏။ငါအရှင်သည်(၎င်းတို့အား)ဆင်ခြင် တုံတရားနှင့်အသိအညာကိုပေးအပ်ခဲ့၏။. . .(၂၁း၇၉)
…ငါတို့သည် ငှက်သတ္တ၀ါတို့၏ဘာသာစကားကိုသင်ကြားပေးခံရ၏။၎င်းပြင်အရာခပ်သိမ်းတို့ကိုချီးမြှင့်ပေးသနားခံရ၏။ . . . . (၂၇း၁၆)
ထို့ပြင်စုလိုင်မာန်အတွက် သူ၏စစ်တပ်များကို စုရုံးစေခဲ့၏။…(၂၇း၁၇)
ငါ၏စာ(သ၀ဏ်)ကိုယူသွားပြီး၎င်း(ဘုရင်မ)တို့ထံချပေး။. . .(၂၇း၂၈)
၎င်းပြင်(ငါအရှင်သည်)စုလိုင်မာန်အတွက်လေကိုအမိန့်ကိုနာခံစေ၏။ . . .(၃၄း၁၂)
ထို့ပြင်(ငါအရှင်သည်)သူ့အတွက်ကြေးနီချောင်းစီးစေခဲ့၏။. . .(၃၄း၁၂)
. . .၎င်းတို့သည်(စုလိုင်မာန်၏)အကျိုးငှာ ၎င်းအလိုရှိသောအဆောက်အအုံများ၊ရုပ်တုများ၊ရေကန်ကြီးများတမျှရှိ ဇလုံ၊အင်တုံ များ၊မပြောင်းမရွှေ့နိုင်သော အိုးကြီးများ ကို လုပ်ပေးကြသည်။ . . .(၃၄း၁၃)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရတမန်တော် စုလိုင်မာန်သခင်သည် အုပ်ချုပ်မှုအတတ်ပညာ(Administrative Art) တရားစီရင်ရေးအတတ်ပညာ (Judicial Art)၊ဘာသာ စကားအတတ်ပညာ(Linguistic)၊စစ်ပညာ(Military Art)၊ သံတမန်အတတ်ပညာ (Diplomacy)၊လေကြောင်း အတတ်ပညာ (Aeronautical) ၊ဗိသုကာ(Architecture)၊မြို့ ပြအင် ဂျင်နီယာ အတတ်ပညာ(Civil Engineering) ၊ ပန်းပုအတတ်ပညာ(Sculpture) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
-ထို့ပြင်သင်တို့သည် အမြဲထိုင်နေကြရမည်ကဲ့သို့တိုက်တာဂေဟာများ တည်ဆောက်ကြသည်။ . . .(၂၆း၁၂၉)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်ဟူးဒ်သခင်၏အမျိုးအနွယ်အားဒ်လူမျိုးတို့သည် ဗိသုကာ အတတ်ပညာ (Architecture) တို့ကိုတတ် သိခဲ့ သည်။
. . မြေပြင်၏နူးညံ့သောနေရာများတွင် ခမ်းနားသောအဆောက်အဦးများကတည်ဆောက်ကြသည့်အပြင် တောင်များကိုဖေါက် ၍နေအိမ်များပြုလုပ်ကြသည်။. . .(၇း၇၄)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါဤမှတ်တမ်းများအရတမန်တော် ဆွာလိဟ်သခင်၏အမျိုးအနွယ် ဆမူးဒ်လူမျိုးတို့သည် ဗိသုကာ အတတ်ပညာ(Architecture) တို့ကိုတတ် သိခဲ့သည်။
– အမှန်ပင်ငါအရှင်သည်(ဇွလ်-ကရ်နိုင်းန်)အားကမ္ဘာမြေ၀ယ်အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ ပေးခဲ့၏။ထို့ပြင်ငါအရှင်သည် ၎င်းအား (ဥစ္စာ ပစ္စည်းလက်နက်ကိရိယာ)အမျိုးမျိုးကိုချီးမြှင့်ခဲ့၏။. . .(၇း၇၄)
– သို့ဖြစ်ပေရာ ၎င်းသည်လမ်းတစ်ခုကိုလိုက်ခဲ့သည်။. . .(၁၈း၈၅)
– ငါအရှင်သည် အိုဇွလ်-ကရ်နိုင်းန် ၊ သင်သည်၎င်းတို့အားပြစ်ဒဏ်ခတ်နိုင် ၊ ထောက်ထားညှာတာနိုင်၊(ကြိုက်ရာပြုနိုင်) သည်။. . .(၁၈း၈၆)
– . . .ယင်းတောင်နှစ်လုံးကြားတွင်စကားနားမလည်နိုင်သော လူမျိုးတစ်မျိုးကိုတွေ့ခဲ့သည်။(၁၈.၉၃)
– . . .ကျွန်ုပ်သည်သင်တို့နှင့် ၎င်းတို့အကြားဝယ်အလွန်ခိုင်ခံ့မြင့်မားသော တံတိုင်းကို ပြုလုပ်ပေးမည်။(၁၈း၉၅)
– . . . (အရည်ကျိုထားသောကြေးနီကို)ကျွန်ုပ်ထံယူခဲ့ကြ ၊ဤသံပြားပေါ်၌ကျွန်ုပ်သွန်းလောင်းအံ့။(၁၈း၉၆)
– . . .(ဇွလ်-ကရ်နိုင်းန်က)ဟောကြားခဲ့သည်မှာ -မည်သူမဆိုမတရားပြုမြဲပြုနေက . . ။(၁၈း၈၇)
– ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်ဇွလ်-ကရ်နိုင်းန်သခင်သည် အုပ်ချုပ်ရေးအတတ်ပညာ (Administrative Art)၊ ခရီးသွားအတတ်ပညာ (Tourism)၊စစ်ပညာ (Military Art)၊ ဘာသာစကားအတတ်ပညာ(Linguistic)၊ ဆောက်လုပ်ရေးအတတ်ပညာ(Civil Engineering)၊သတ္တုအင်ဂျင်နီယာ အတတ်ပညာ (Metal Engineering)၊ဟော ပြောမှုအ တတ်ပညာ(Preaching Art) တို့ကို တတ်သိခဲ့သည်။
ငါအရှင်သည်(ဇက္ကရီယာ)၏ပန်ကြားချက်ကိုလက်ခံ၍၎င်းအားသား ယဟ်ယာ ကိုချီးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ . . .(၂၁း၉၀)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော် ဇက္ကရီယာသခင်၏ သားသမီးမွေးမြူစောင့်ရှောက်နည်းအတတ်ပညာ (Child caring Art) တို့ကို တတ်သိခဲ့ သည်။
. . .၎င်းပြင်ငါအရှင်သည် (အီစာအား) အင်န်ဂျီးလ်ကျမ်းကိုချီးမြှင့်၏။ထိုကျမ်းတွင် လမ်းညွှန်နှင့်အလင်းရောင်ရှိ၏။ .. .(၅း၄၆)
-သင်သည်ပုခက်တွင်း၌လည်းကောင်း ၊ အရွယ်ရသည့်အခါ၌လည်းကောင်း လူတို့ကို(ဟော)ပြောခဲ့သည်။
၎င်းပြင်တစ်ခါတရံသင်သည် မြေဖြင့်ငှက်ရုပ်ကိုငါအရှင်၏အမိန့်ဖြင့်ပြုလုပ်၍ ယင်းအရုပ်ထဲသို့မှုတ်ရာငါအရှင်၏ အမိန့်ဖြင့် ငှက် ဖြစ်သွား၏။
၎င်းပြင်တခါတရံသင်သည်ငါအရှင်မြတ်၏အမိန့်တော်ဖြင့် သေသူကို ရှင်ပြန်ထွက်စေခဲ့၏။ . . (၅း၁၁၀)
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ပါ ဤမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော် အီစာသခင်၏ဥပဒေပညာ(law)၊ဘာသာစကားအတတ်ပညာ (Linguistic)၊ပန်းပုအတတ်ပညာ (Sculpture)၊ မျက်စိအထူးကု(Eye Specialist) ၊ အရေပြားအထူးကု(Dermatologist)၊ ဆေးအတတ်ပညာ(Medicine)တို့ကို တတ်သိခဲ့သည်။
စီရာသိ(တမန်တော်မြတ်၏ အထုပ္ပတ္တိကျမ်းများ)ပါမှတ်တမ်းများအရ တမန်တော်ချုပ် မုဟမ္မဒ်သခင်သည်-
ငယ်စဉ်ဘ၀တွင် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး အတတ်ပညာ(Husbandry) ၊ ရေကူးအတတ်ပညာ(Swimming)၊ စစ်သတင်း/လက်နက် စုဆောင်းမှုအတတ်ပညာ (Military Art) တို့ကိုတတ် သိခဲ့သည်။
လူရွယ်ဘ၀တွင် သိုင်းအတတ်ပညာ(Martial Art) ၊ ကုန်သွယ်ရေးအတတ်ပညာ(Trading) တို့ကိုတတ်သိခဲ့သည်။
လူကြီးဘ၀တွင် ဥပဒေပညာ(law) ၊အုပ်ချုပ်ရေးအတတ်ပညာ(Diplomatic Art)၊ စစ်ပညာ(Military Art)၊ ဗိသုကာအတတ် ပညာ(Architecture)၊ သင်ကြားရေးအတတ် ပညာ (Teaching Art) ၊ တရားစီရင်ရေးအတတ်ပညာ(Judicial Art) ၊ ဟောပြော မှုအတတ်ပညာ(Preaching Art) စသည်ဖြင့် စွယ်စုံတတ်သိခဲ့သည်။(တမန်တော်မြတ်အထုပ္ပတ္တိ ၊ မော်လာနာဃာဇီ။ ပ-ဒု- တ-စ အတွဲများ)
ထိုသို့ဤသို့သော အထောက်အထားများအရ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်တွင် (Major) အထူးပြုဘာသာရပ်အသီးသီး အ လိုက်သင်ကြားပေးနေသော- ဆေးတက္ကသိုလ်များ (Universities of Medicine) နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ (University of Technology) တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသရေးနှင့်မွေးမြူရေးတက္ကသိုလ် (University of Veternary and Husbandary) စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ် (University of Agriculture) (တမန်တော်ချုပ်၏ အန်စွာရီအဆွေတော်များတတ်သိခဲ့သော အတတ်ပညာ) ရေ ကြောင်း (အင်ဂျင်နီယာ) တက္ကသိုလ် (University of Marine (Engineering) Science) -လေကြောင်းတက္ကသိုလ် (University of Aeronaurtical) -စိးပွားရေးတက္ကသိုလ် (University of Economics) -သူနာပြုတက္ကသိုလ် (University of Nursing) [တမန်တော်ချုပ်၏ဇနီး အာအိရှာ သခင်မကြီးတတ်သိခဲ့သည်။
စစ်တက္ကသိုလ် (Defence Service Accedamy) ပညာရေးတက္ကသိုလ် (University of Education) ဥပဒေ၊၀ိဇ္ဇာ-သိပ္ပံများ သင်ပေးသော တက္ကသိုလ်၊ဒီဂရီကောလိပ်(များ) (Arts and Science Universities) အုပ်ချုပ်ရေး ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ၊ စစ်ပညာ ၊ ဥပဒေပညာရပ်များ သင်ကြားပေး ခဲ့သောဖောင်ကြီးကဲ့သို့သင်တန်း ၊ လုပ်ငန်းခွင် သင်တန်းများ အိမ်တွင်းမှုသိပ္ပံ ၊ အားက စား သိပ္ပံ စသည်တို့တွင် သင်ကြားပေးနေသော ခေတ်မီပညာရပ်များမှာ တမန်တော်သခင်များ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ခဲ့သော အတတ်ပညာရပ်များပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုပညာရပ်များကို သင်ယူတတ်မြောက်၍ဘွဲ့ရသူများသည် ထိုတမန်တော်များ၏ အမွေစားအမွေခံများပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုဘွဲ့ရ (အီမာန်ရှင်)(အိုလမာ)ပညာရှင်များသည် (အန်ဘီယာ) တမာန်တော်သခင်များ၏ အမွေစားအမွေခံ စစ်စစ် များဖြစ်ကြပါတော့သည်။
“ပညာဗဟုသုတတာ (မုအ်မင်န်) ယုံကြည်သူများရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ရတနာသိုက်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်နေရာမှာတွေ့တွေ့ ရအောင် ယူရမယ်။“
ဟုဟောကြားထားရာ ခေတ်တ္ကသိုလ်များမှပေးနေသော ခေတ်ပညာများမှာလည်း တမန်တော်သခင်များ၏ပညာအမွေများပင် ဖြစ်၍မွတ်စလင်မ်လူငယ်များ မရ ရအောင် ယူရန် တာဝန်ရှိပါသတည်း။
ခေတ်ပညာတတ်မှ ဤလောက၌လှပတင့်တယ်မည်ဖြစ်သည်။ဘာသာရေးပညာတတ်မှ တမလွန်လောက၌ လှပတင့်တယ်မည်ဖြစ်သည်။ တတ်သောပညာကို လက်တွေ့ အသုံးချမှ ပူပန်သောကကင်းဝေးရမည်ဖြစ်သည်။
ခေတ်ပညာမှာ အစ္စလာမ်နှင့်ဆန့်ကျင်သော အရာမဟုတ်။အစ္စလာမ်၏ တမန်တော်သခင်များတတ်သိခဲ့သော အရာသာဖြစ် သည်။ အစလာမ်ကိုချစ်လျှင်၊ တမန်တော် သခင်များကိုချစ်လျှင် ခေတ်ပညာ(များ)လည်း တတ်သိလိမာအောင် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်ရမည်သာဖြစ်ပါတော့သည်။